Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း (Sepsis) ကို speticaemia ဟုလည်းခေါ်ပြီး ပိုးဝင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်း၏ နောက်ဆွဲပြဿနာအဖြစ် အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုးဝင်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးမှ ရောင်ရမ်းခြင်းဖြင့် တုန့်ပြန်ရန် သွေးတွင်းထဲသို့ ဓါတုပစ္စည်းများ ထုတ်လွှတ်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပင်။ ထိုရောင်ရမ်းခြင်းမှ ပြောင်းလဲမှုအတန်းလိုက် ဖြစ်လာစေပြီး အင်္ဂါများစွာကိုထိခိုက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂါများ ပျက်စီးခြင်းဖြစ်လာပါသည်။
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းမှာ အဖြစ်များပြီး အရွယ်ကြီးရင့်သူ၊ ကိုယ်ခံအားကျနေသူများတွင် အန္တရာယ်ပိုကြီးပါသည်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ကိုယ်အပူချိန် 38.3oC အထက် သို့မဟုတ် 36oC အောက်
တစ်မိနစ်လျှင် နှလုံးခုန်နှုန်း ၉၀ ထက်ကျော်ခြင်း
အသက်ရှုနှုန်း တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀ ကျော်ခြင်း
ပြင်းထန်သော သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းတွင် အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိပါသည်။
ပိုးကူးစက်မှုဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သွေးဆိပ်သင့်လက္ခဏာများ ပေါ်လာလျှင်
ပြင်းထန်သောသွေးဆိပ်သင့်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးဆိပ်သင့်သွေးလန့်ခြင်း
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မှိုကူးစက်ခြင်းတို့မှ သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဖြစ်အများဆုံးမှာ နမိုးနီးယား၊ ဝမ်းအတွင်းပိုးကူးစက်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်တွင်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့် သွေးအတွင်ပိုးဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးရင့်သောလူများကိုလည်း သွေးဆိပ်သင့်ရသည့်အကြောင်းရင်းဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပြင် ခုခံနိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများမှလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရင်ကသူတို့ကိုသတ်ရန် သုံးဖူးသော ပဋိဇီဝဆေးများကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိလာသော ဘက်တီးရီးယားများဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှ ကိုယ်ခံအားကျခြင်းဖြစ်ပြီး HIV၊ ကင်ဆာကုထုံး သို့မဟုတ် အင်္ဂါအစားထိုးဆေးများမှ ကိုယ်ခံအားကျခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အနာများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရှိခြင်း ဥပမာ အပူလောင်ခြင်း
ကိုယ်တွင်း၌ထည့်ထားသောပစ္စည်းများရှိခြင်း – ဆေးသွင်းအပ်များ သို့မဟုတ် အသက်ရှုပိုက်များ
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်၌သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းရှိမရှိ၊ ပိုးကူးစက်မှြုပင်းထန်ခြင်းရှိမရှိ ဆရာဝန်မှဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် စစ်ဆေးမှုများလုပ်ရန်လို၏။
ပထမဆုံးလုပ်ရမည်များမှာ သွေးစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွေးခဲပြဿနာများ၊ အသည်း ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများ၊ အောက်စီဂျင်ကျမကျ၊ ခန္ဓါကိုယ်၏ အရည်ဓါတ်နှင့် သွေး၏အက်စစ်ပမာဏကို ထိန်းသော လျှပ်ကူးသတ္တုဓါတ်များ မညီမျှခြင်ရှိမရှိ စသည်တို့အား သိရှိနိုင်၏။
သင့်လက္ခဏာများနှင့်အတူ သွေးစစ်အဖြေများအပြင် ဆီးတွင်း၌ ပိုးရှိမရှိသိရန် ဆီးစစ်ခြင်း၊ အနာရှိနေလျှင် အနာတွင်ပိုးရှိမရှိသိရန် မန်းအရည်များစစ်ဆေးခြင်း၊ ချွဲများထွက်လျှင် ပိုးအမျိုးအစားသိရန် စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဆုတ်အားကြည့်ရန် ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အူအတက် မုန့်ချိုအိတ်နှင့် အူများအတွင်း ဖြစ်နိုင်သော ပိုးဝင်ခြင်းများရှိမရှိသိရန် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်နှင့် သားဥအိမ်များ၌ ပိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိသိရန် တီဗွီဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်များကို အထက်ပါနည်းများနှင့် ပိုးကိုရှာမရပါက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Sepsis (သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အစောပိုင်းအဆင့်တွင် သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းအားသိရပြီး သက်ဖြစ်အင်္ဂါများအား ထိခိုက်မှုမရှိသေးပါက အိမ်မှာပင် ပဋိဇီဝဆေးများကိုသုံးပြီး ကုသနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေအတိုင်းဆိုလျှင် အပြည့်အဝပြန်ကောင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းအတွက် ဘာဆေးများမသုံးဘူးဆိုပါက သွေးဆိပ်သင့်သွေးလန့်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်၏။ ထိုကဲ့သို့အခြေအနေဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်မှ ဆေးများစွာဖြင့် သွေးဆိပ်သင့်ခြင်းကို ကုရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ပိုးများကိုသတ်ရန် ပဋိဇီဝဆေးများ အကြောမှသွင်းခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်စေရန် သွေးကြောလှုံ့စော်ဆေးများ၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ထိန်းန် အင်ဆူလင်၊ အရောင်ကျစေရန် ကော်တီကိုစတီးရွိက်များနှင့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ဆိုးဝါလာလျှင် စလိုင်းချိတ်ခြင်း၊ အသက်ရှုစက်တပ်ခြင်းများ လိုအပ်လာနိုင်၏။ ကျောက်ကပ်များကိုထိသွားပါက ကျောက်ကပ်ဆေးရန်ပါ လိုနိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်ဆေးရာတွင် စက်ပစ္စည်းမှ ကျောက်ကပ်၏လုပ်ငန်းများဖြစ်သော အန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆားများနှင့် သွေးအတွင်းမှ ရေအပိုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းတို့အား လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ချို့ဖြစ်ရပ်များ၌ ပိုးဝင်နေသောနေရာကို ခွဲစိတ်ပြီး ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်နိုင်၏။ ခွဲစိတ်ရာတွင် ပြည်ရှိသောနေရာအား ပြည်များစုပ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုးဝင်နေသော တစ်ရှူးအား ဖယ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် သွေးဆိပ်သင့်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံသည် သွေးဆိပ်သင့်နိုင်မည့် ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
Sepsis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sepsis/home/ovc-20169-784. Accessed July 7, 2016.